သူမကို မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတတ်တဲ့ ဏကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Askstyle
သူမကို မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတတ်တဲ့ ဏကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ပရိသတ္ေတြအားလံုးက “မီေမာင္နွံ” လို့ ခ်စ္စနိုးနဲ့ တင္စားေခၚေဝၚၾကတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ပိုင္ျဖိဳးသုနဲ့ ဒါရိုက္တာ ဏၾကီးတို့က အနုပညာေလာကမွာ အသီးသီး ေအာင္ျမင္တဲ့ အနုပညာရွင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ျဖိဳးသုကလည္း သရုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အကယ္ဒမီဆုၾကီးကို ပိုင္ဆိုင္ရရိွထားသလို ဒါရိုက္တာဏၾကီးကလည္း ထူးခၽြန္ဆုေတြ ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ပိုင္ျဖိုးသုနဲ့ ဏၾကီးတို့ကို စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ အားေပးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ (၉) နွစ္ေက်ာ္ကြာတဲ့ ပိုင္ျဖိဳးသုနဲ့ ဏၾကီးတို့ ဇနီးေမာင္နွံက တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြ၊ ၾကင္နာမႈေတြနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေလးကို တည္ေဆာက္ထားျပီး သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန့မွာေတာ့ ပိုင္ျဖိဳးသုက သူမကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္တဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဏၾကီးရဲ့ အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲ အရႊန္းေဖာက္ေျပာဆုိလာတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ မိုမိုေလးပရိသတ္ေတြအတြက္ ပိုင္ျဖိဳးသုတင္ထားတဲ့စာေလးကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
” “ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့လူလူသူသူပရိတ္သတ္ကိုလွည့္ရယ္ျပေနတယ္….ခဏေနရင္ေတာ့ ဒီအေမႊစိန္ငါ့ဘက္လွည့္ၿပီးဘာမ်ားေမႊဦးမယ္မသိဘူး”ဟုေတြးကာ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသူဦးေရခဲ…. ” ဆိုျပီး မွ်ေဝထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္ျဖိဳးသုနဲ့ ဏၾကီးတို့ ဇနီးေမာင္နွံကေတာ့ အင္မတန္ခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲေနာ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ပိုင္ျဖိဳးသုနဲ့ ဏၾကီးရဲ့အျဖစ္ကို သေဘာက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေပးျပီး ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ၾကီးကို မိုမိုေလးမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါတယ္။
ပရိသတ်တွေအားလုံးက “မီမောင်နှံ” လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးတို့က အနုပညာလောကမှာ အသီးသီး အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုကလည်း သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသလို ဒါရိုက်တာဏကြီးကလည်း ထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့် အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် (၉) နှစ်ကျော်ကွာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ၊ ကြင်နာမှုတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ထားပြီး သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက သူမကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေတတ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဏကြီးရဲ့ အကြောင်းကို အခုလိုပဲ အရွှန်းဖောက်ပြောဆိုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မိုမိုလေးပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်ဖြိုးသုတင်ထားတဲ့စာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
” “ခုလောလောဆယ်တော့လူလူသူသူပရိတ်သတ်ကိုလှည့်ရယ်ပြနေတယ်….ခဏနေရင်တော့ ဒီအမွှေစိန်ငါ့ဘက်လှည့်ပြီးဘာများမွှေဦးမယ်မသိဘူး”ဟုတွေးကာ မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေသူဦးရေခဲ…. ” ဆိုပြီး မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးရဲ့အဖြစ်ကို သဘောကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။